Xildhibaanada Aqalka Sare oo maanta ka doodaya arrinta Qalbi-dhagax – XAMAR POST
Xildhibaanada Baarlamaanka Aqalka Sare ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho, kadib ka soo laabashadooda fasaxii ay galeen Ciidii kahor.
Kulanka xildhibaanada Aqalka Sare oo maanta Isniin ah dhacaya ayaa waxaa Ajandihiisa ugu horeeya uu yahay, arrinta Sarkaalka jabahada ONLF C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax), sida uu sheegay Guddoomiyaha Aqalka Sare.
Cabdi Xaashi C/laahi Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa sheegay in Goluhu uu go’aan ka soo saari doono sax iyo qalad wuxuu yahay go’aankii Xukuumadda ay ku sheegtay in (Qalbi-dhagax) uu yahay Argagixiso.
“Ajandahaha Guddiga joogtada uu ka hadlay waxa weeye ka doodista go’aankii Xukuumadda ay gaartay ee ku saabsanaa u gudbinta C/kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ee Itoobiya loo gudbiyay iyo Xukuumadda go’aanka ay ka soo saartay weeye, kaas aan rabno inaan Aqalka geyno, waxaana ka soo saari doonaa go’aan sax iyo qalad wuxuu yahay go’aankaas xukuumadda ay gaartay” Ayuu yiri Cabdi Xaashi.
Shabaab oo sheegtay in ay dagaal kula wareegeen Beled-xaawo